Madaxweyne Xasan oo shir gudoomiyey kulan degdeg ah oo ay yeesheen Golaha Wasiirada – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Madaxweyne Xasan oo shir gudoomiyey kulan degdeg ah oo ay yeesheen Golaha Wasiirada
21st February 2015 A warsame Af Soomaali, Featured 0
Mareeg.com: Kulan degdeg ah oo ay xalay isugu yimaadeen Golaha Wasiirada Xukuumada Soomaaliya oo uu shir gudoominayay Madaxweynaha Soomaaliya, Xasan Sheikh Maxamuud ayaa xalay lagu qabtay Muqdisho.
Kulanka ayaa waxaa looga hadlay qaraxyadii shalay saladdii Jimcaha kadib ka dhacay Hotelka Central ee Magaalada Muqdisho, kaasoo galaaftay nolosha dad ka badan labaatan oo isugu jiray mas’uuliyiin iyo shacab.
Kulna oo ahaa mid albaabadu u xiranyihiin oo ay Saxafadu banaanka ka joogtay ayaa waxaa uu qaatay dhowr saacadood, waxaana lagu lafa guray sida la yiri sidii diirada cadaalada loo horkeeni lahaa dadkii falkaas ka mas’uulka ahaa.
Markii uu soo dhamaaday kulankaasi ayaa waxaa warbaahinta la hadlay Wasiirka Amniga Gudaha Soomaaliya, Cabdi Risaaq Cumar Maxamed oo faahfaahiyay go’aanada ka soo baxay kulanka.
Wasiirka ayaa sheegay in dhaawacyo fudud ay soo gaareen ku simaha Ra’iisul wasaaraha dalka Maxamed Cumar Catre iyo labo wasiir oo Xukuumada ka tirsan.
War saxaafadeed ka soo baxay Xafiiska Ra’iisul Wasaaraha ayaa lagu sheegay in weerarkaas uu ahaa mid argagixiso, isla markaana ay ku dhinteen ilaa 25-qof oo isugu jira Mas’uuliyiin iyo dad kale.
Kulankan deg dega ahaa ayaa waxaa lagu magacaabay Guddiyo isugu jira kuwo amni iyo Gudi taakuleyn la gaara dadkii wax ku noqday weerarkaas.
Guddi ka kooban Wasiirka Wasiirka Amniga Gudaha, Wasiirka Gaashaandhigga, Wasiirka Arrimaha Gudaha, Wasiirka Caafimaadka iyo Guddoomiyaha Gobolka Banaadir ayaa waxay ka howl geli doonaan taakuleynta dadka ay waxyeeladu soo gaartay.
Sidoo kale waxaa la dhisay Guddi Amni oo hormuud ay ka yihiin Wasiirka Amniga Gudaha iyo Wasiirka Gaashaandhigga, kuwaasoo baaritaan ku soo sameynaya falkii argagixiso, si loo qaado tallooyinka xiga.
Afhayeenka laamaha amaanka Soomaaliya, Qaasim Axmed Rooble ayaa sheegay in 14 loo qabtay oo su’aalo loo weydiinayo sidii gaariga qaraxa lagu xiray uu kusoo galay gudaha hotel Central.
Qaraxyadii shalay ka dhacay hotelka Central ee Muqdisho ayaa waxaa sheegtay ururka Alshabaab.
Laamaha Amaanka oo baaraya sida gaariga qarxay ku galay Hotel Central
Golaha Amaanka, Mareykanka & Midowga Yurub oo cambaareeyey weerarkii Hotel Central